Baahiyaha Puntland iyo bisaylka siyaasadeed iyo dawladnimo ee looga fadhiiyo madaxweyne Deni. – Radio Daljir
Baahiyaha Puntland iyo bisaylka siyaasadeed iyo dawladnimo ee looga fadhiiyo madaxweyne Deni.
Abriil 8, 2019 2:16 g 0
Madaxweynaha Puntland ee cusub hadda wuxuu xilka hayaa muddo saddex bilood ku siman, maalmana ka dhimmanyihiin, sidaasi oo ay tahay madaxweyne kasta oo Puntland loo doorto wuxuu la kowsadaa baahiyo taagnaa oo dal iyo dad, iyo kuwo xilqabashadiisa la curta.
Sikasta oo ay noqotose madaxweyne kasta oo yimaada Puntland iyo xukuumaddiisana filashadooda waa xal u helka baahiyaha dall iyo dad haddii ay ahaan lahayd ammaan, dhaqaale, siyasad, hormarin iyoarrimo kale oo muggooda iyo miisaankooda leh.
Cabdirashiid Shiikh Cali wuxuu ka mid yahay jaaliyadda Puntland ee dalka Istureeliya, waxaa nin bartay cilmiga siyaasadda. Wareysi gaar ah oo uu siiyey Radio Daljir ayuu uga hadlay baahiyaha Puntland ee xilligaan iyo waxka qabashada looga fadhiyo madaxweyne Siciid Cabdillaahi Deni iyo xukuumaddiisa.
Hargaisa iyo ilbaxnimada Wargaisyada (Maqaal)